Eyona emerald inkulu emhlabeni-Uhlaziyo olukhulu 2021-Ividiyo eNtsha
Eyona emerald inkulu ehlabathini yiNkalamu, Ingonyama Emerald kodwa iBahia Emerald ithathwa njengeyona emerald inkulu eyakha yafunyanwa.
Kuxhomekeka ekubeni sijonga ibhloko eyenziwe ngamatye aliqela okanye ikristale enye.
Eyona emerald inkulu eyakha yafunyanwa
Eyona emerald inkulu emhlabeni yiBahia Emerald: 1,700,000 carats
I-Bahia Emerald iqulethe enye ye-shard enye enkulu eyakha yafunyanwa. Eli litye, elinobunzima obumalunga ne-341 kg okanye i-1,700,000 carats, livela eBahia, eBrazil kwaye ziikristale ezifakwe kwilitye elisingathiweyo. Yasinda cebetshu kwizikhukula ngexesha leNkanyamba uKatrina ngo-2005 ngexesha lokugcina kwindawo yokugcina izinto eNew Orleans.
Kwakukho impikiswano yobunini emva kokuba kwathiwa ibiwe ngoSeptemba 2008 ukusuka kwigumbi elikhuselekileyo eMzantsi El Monte eLos Angeles County, California. Igugu lalibekwe kwaye ityala kunye nobunini bugqityiwe. Eli litye lixabise i $ 400 yezigidi, kodwa elona xabiso alicacanga.
Kutshanje kufunyenwe i-emerald ye-180,000 carats emerald
Kutshanje kwavunjululwa ilitye elikhulu leenqwelo-mafutha ezili-180,000 kutshanje ngabavukuzi ngaphakathi kweMayini yaseCarnaiba eBrazil. Lo mzekelo ubalaseleyo we-emerald ume zii-4.3 iinyawo ubude kwaye unexabiso elimalunga ne- $ 309 yezigidi.
Ilitye lafunyanwa kwindawo yaseBrazil eyaziwa ngokuvelisa iigugu ezintle, iMayini yeCarnaiba ngaphakathi kwiphondo lasePernambuco. Iqoqo lamatye afunyenweyo lafunyanwa kwi-200 yeemitha ubunzulu emgodini kwaye lifuna abantu abali-10 ngeveki epheleleyo ukukhupha nokuphakamisa isihloko siphezulu.
Lo mzekelo uqulethwe zizonke i-180,000 carats zeebheriri ze-emerald. Ngokunikwa ubungakanani, ukunqaba kunye nenani lamakristali, iingcali ziqikelela ukuba isampulu yonke inokuxabisa i-309 yezigidi zeedola.
Umhlaba omkhulu we-emerald yikristale yi-Inkalamu, i-Lion Emerald: 5,655 carats
Elona lizwe likhulu leemerald elinqabileyo, elinobunzima be-1.1kg kwaye lixabisa i-2 yezigidi zeepawundi, lifunyenwe emgodini eZambia. I-carats ye-5,655 gem yafunyanwa yinkampani yezemigodi iGemfields e-Kagem, owona mgodi mkhulu we-emerald emhlabeni, ngo-Okthobha 2, 2020.
Ibibizwa ngokuba yiNkalamu, okuthetha ingonyama kulwimi lwasekhaya isiBemba. I-Gemfields ithe kuphela ngamatye anqabileyo kwaye axabisekileyo anikwa amagama. Igama lesiBemba lonyulwa ukuhlonipha umsebenzi wolondolozo lwenkampani yezemigodi.
I-Emerald Unguentarium: i-2,860 carats
I-Emerald Unguentarium, i-2,860 ct (20.18 oz) ye-emerald vase eqoshwe ngo-1641, iboniswa kwi-Imperial Treasury, eVienna, e-Austria.
I-Emerald Buddha eNgcwele: Iikharati ezingama-2,620
Imifanekiso eqingqiweyo evela kwi-3,600 ct yaseZambia emerald ngo-2006, umfanekiso oqingqiweyo we-Sacred Emerald Buddha unobunzima obungama-2,620 ct.
Umelo lukaSiddhartha Gautama lelinye lawona matye anqabileyo amakhulu emhlabeni. Wayebonakaliswa kwindawo esemgangathweni ye-mudra ngokwesiko enxulunyaniswa nesiluleko kumalungu osapho (isangha okanye ububingeleli) ukuba bayeke ukuxabana phakathi kwabo.
Ukulinganisa i-2,620 carats, ine-hue eluhlaza eluhlaza (ngenxa yobumdaka be-chromium kunye ne-vanadium), kum ngowona mbala ubalaseleyo we-emerald, kwaye ayinazinto zinokufakwa.
Kunqabile kakhulu ukuba umgangatho onjalo ubenayo nayiphi na enye into ngaphandle kokuqunjelwa kwiigugu ezinamacandelo, ke isigqibo esenziwe yinkampani ukuyikrola sasinesibindi. Yayikrolwe yaza yahonjiswa ngumzobi wejeyidi ogama linguAung Nyein, owayevela eBurma kodwa ehlala eThailand.
IGuinness Emerald Crystal: i-1,759 carats
I-Guinness Emerald Crystal efunyenwe kwimigodi ye-emerald ye-Cosuez yenye yezona kristali zikumgangatho ophezulu ze-emerald ehlabathini, kwaye yeyona kristale inkulu e-emerald kwingqokelela yekristale eyi-Banco Nacionale de la Republica eBotota, isixeko esilikomkhulu. Kholambiya.
Imvelaphi yegama elithi Guinness ayaziwa, kodwa iphakanyisiwe, i-1759-carat, ikristale eluhlaza eqaqambileyo ngokungathandabuzekiyo yayinazo zonke iziqinisekiso zokungena kwincwadi yeerekhodi zeGuinness njengeyona gem inkulu esemgangathweni emhlabeni ubuncinci iminyaka ethile de yagqithiswa ngamanye amakristali emvelo emerald.
Iinqwelo ezili-1,686.3 ze-LKA kunye ne-1,438 carats uStephenson emeralds
Izicwangciso zendalo zokwenza into emisa ngokwenene ubungangamsha bayo. Iinqwelo ezili-1,686.3 ze-LKA kunye ne-1,438 carats uStephenson emeralds wafunyanwa ngo-1984 nango-1969.
Ngokulandelanayo ngaphakathi kwendawo efihliweyo iphakathi kwamatye amahle kakhulu emhlabeni, kodwa i-gemologists eyaziwayo yawaxabisa la matye mabini amakhulu, emvelo ekristale ekhwankqisayo ebekwe phakathi kweemeraldi ezinkulu eziye zafunyanwa emhlabeni: I-LKA neStephenson.
I-Mim Emerald: i-1,390 carats
I-crystal enkulu, e-hexagonal prismatic crystal ye-1,390 carats engasikiweyo ngombala oluhlaza ococekileyo. Icacile kwaye inezinto ezimbalwa ezingafakwanga kwi-2/3 ephezulu, kwaye iyagqitha kwinxalenye esezantsi. Izindlu kwiMyuziyam yaseMim, eBeirut, eLebhanon.
I-Duke yase-Devonshire ye-Emerald: i-1,383.93 carats
I-Duke yase-Devonshire Emerald yenye yezona zinto zinqabileyo nezidumileyo emhlabeni, ezinobunzima be-1,383.93 carats. Isuka emgodini eMuzo, eColombia, yayiphiwe okanye yathengiswa ngu-Emperor Pedro I waseBrazil kuWilliam Cavendish, i-6th Duke yase-Devonshire ngo-1831. Yaboniswa kwiGreat Exhibition eLondon ngo-1851, kwaye kutshanje kwiNdalo. Imbali yeMyuziyam ngo-2007
I-Isabella Emerald: iikiti ezingama-964
I-Isabella Emerald, i-964 carats igawulwe ngamatye, iphethwe yi-Archeological Discovery Ventures, LLC.
U-Isabella Emerald ufumana igama lakhe kuKumkanikazi u-Isabella wase-Portugal, ukumkanikazi ongumlingani ka-King Charles V (1516 ukuya ku-1556), uMlawuli oyiNgcwele oyi-Roma, u-King wase-Spain, kunye no-Archduke wase-Austria, owazuza njengelifa ubukhosi obukhulu obunwenwela i-Europe iphela, i-Spain. kunye neNetherlands ukuya eOstriya kunye noBukumkani baseNaples, nakwimimandla yaphesheya kweSpain America.
UKumkanikazi u-Isabella wayenqwenela i-crystal kwaye wayelangazelela ukuyifumana, emva kokuva iingxelo ezikhanyayo zelitye elivela kuHernan Cortez, kwileta eyayibhalelwe evela eMexico. Ilitye eliyigugu elaziwa njenge "Emerald of Judgment" eliyimfihlakalo laziswa kuCortez, nguMontezuma II, uKumkani woBukumkani bama-Aztec, ngela xesha uCortez wangena esixekweni saseTenochtitlan kunye nemikhosi yakhe ngoNovemba 8, 1519. UHernan Cortez walithiya ilitye elinqabileyo. ukuhlonipha uKumkanikazi u-Isabella, ukumkanikazi ongumlingani kaCharles V, uMlawuli oyiNgcwele waseRoma kunye noKumkani waseSpain.
IGachalá Emerald: Iinqwelo ezingama-858
IGachalá Emerald, enye yezona zimbiwa zixabisekileyo nezidumileyo emhlabeni, yafunyanwa ngonyaka we-1967, emgodini obizwa ngokuba yiVega de San Juan, ebekwe eGachala, idolophu eseColombia, ebekwe kwi-142 km ukusuka eBogota. UGachalá Chibcha uthetha "indawo yeGacha." Kule mihla i-crystal ise-United States, apho yanikelwa khona kwi-Smithsonian Institution yi-New York City jeweler, uHarry Winston.
I-Patricia Emerald: iikiti ezingama-632
I Patricia yinto enkulu nenombala obalaseleyo. Kwiikarati ezingama-632, i-dihexagonal, okanye i-crystal-side, icristal ithathwa njengenye yeemeraldi ezinkulu emhlabeni. Ifunyenwe eColombia ngo-1920, yathiywa ngegama lentombi yomnini-mgodi.
Iimpazamo kule kristale ziqhelekile kodwa ziyayonakalisa ukomelela kwegem enzima. Lo mzekelo yenye yezimbalwa zeemeraldi ezigcinwe zingaswanga. Namhlanje, iColombia isengowona mthombo uphambili weemeraldi.
IMogul Mughal Emerald: Iinqwelo ezingama-217.80
IMogul Mughal Emerald yenye yeemeraldi ezinkulu ezaziwayo. Indlu yefandesi uChristie wayichaza njenge:
I-emerald exutywe ne-emerald eyaziwa ngokuba yi-Mogul Mughal enobunzima be-217.80 carats, i-obverse ikrolwe ukubhengeza kwe-Shi'a kwisicatshulwa esihle se-naskh, yomhla we-1107 AH, umva ogqitywe kuyo yonke indawo ngomhombiso wefoliate, i-rosette esembindini ejikelezwe ziintyatyambo ezinkulu, Ngolayini weentyatyambo ezincinci ezintathu zepoppy, macala omabini, imiphetho ebunjiweyo eqingqiwe kunye nokuhonjiswa kweherringbone, icala ngalinye kumacala amane lagrumba izihlanganisi, 5.2 * 4.0 * 4.0 cm.
Ekuqaleni yayimbiwa eColombia, yayithengiswa eIndiya, apho amatye ayenqweneleka kakhulu kubalawuli boMbuso kaMughal. UMogul Mughal wahlukile phakathi kwamakristali kaMughal ngokuzala umhla- 1107 AH (1695-1696 AD) - ophakathi kolawulo luka-Aurangzeb, umlawuli wesithandathu. Nangona kunjalo, abalawuli bakaMughal babengamaSunni, kanti lo mbhalo, uSalawat we-heterodox ozinikele kuHassan ibn Ali kunye noHusayn ibn Ali okwabizwa ngokuba nguNad e Ali, nguShi'a, esenza ukuba kungenzeka ukuba yayingeyo-Aurangzeb, kodwa yenye inkundla okanye amagosa akhe.
Yathengiswa nge-27 kaSeptemba 2001 nguChristie nge- £ 1,543,750, kubandakanya nepremiyamu yomthengi. Ukusukela nge-17 kaDisemba ngo-2008, yayiseMyuziyam yobuGcisa bamaSilamsi, eDoha, eQatar.
Umlawuli waseCarolina: Iinqwelo ezingama-64
I-Karatina Emperor eyi-64.82 carat ibeka iinyawo ze-NC kwimephu! Le Nerald Emerald eyaziwayo yaseNorth Carolina kwathiwa iphefumlelwe sisiqwenga esifanayo esasiphethwe nguCatherine the Great.
I-Empress yayine-emerald entle emile okwe-emerald yaseColombia kunye needayimani ezijikeleze i-emerald kwi-brooch eyayithengisa kwifandesi kaChristie ngaphezulu kwe- $ 1.65 yezigidi. Umlawuli waseCarolina, ofunyenwe ekuhlaleni eHiddenite, NC, wathengwa kunyaka ophelileyo kwaye ngoku kutshanje unikelwe kwiMyuziyam yaseNorth Carolina yezeNzululwazi yezeNdalo eRaleigh, NC.
Elona candelo lilikhulu layo yonke le nto kukuba umntu oxhamlayo ucele ukuhlala engaziwa. Umboniso kumyuziyam kuthiwa uneekristali ezintathu ezingasitywanga. Elona litye likhulu kula matye anobunzima be-1,225 carats ngumbala oluhlaza okwesibhakabhaka onqwenelekayo onokuthelekiswa namatye anqabileyo kaMuzo afunwa kakhulu.
I-Emerald yase-Saint Louis: i-51.60 carats
I-emerald yaseSaint-Louis ehombise isithsaba sooKumkani baseFrance ivela kwimigodi yase-Austria kunye ne-emeralds yamandulo yase-Europe. Le migodi ibinemveliso de kwafika inkulungwane ye-19, phantse de kwafunyanwa ii-Urals ezazifakwe ngo-1830.
I-Chalk Emerald: Iikharati ezingama-37.82
Abalawuli basebukhosini base-Baroda State, ilizwe lenkosana e-India, babekhe baba nelitye. Yayingumbindi we-emerald kunye nentsimbi yomqala enxitywe nguMaharani Saheba, owayedlulisela kunyana wakhe, uMaharajah Cooch Behar.
Kwinkulungwane yama-20, i-gem yaphinda yafunyanwa kubunzima bayo bokuqala be-38.40 carats (7.680 g) kwaye yabekwa kwisangqa esenziwe nguHarry Winston, Inc., apho ijikelezwe ziidayimani ezimile okweeparari ezingamashumi amathandathu, zizonke malunga neekarati ezili-15.
Iringi yanikelwa ngu Mnu noNksk. O. Roy Chalk kwi Smithsonian Natural History Museum ngonyaka ka 1972 kwaye iyinxalenye I-SmithsonianGem kaZwelonke kunye nokuQokelelwa kweMaminerali.
Iinqwelo ezingama-7,052 ezingasikwanga yikristale evela eColombia, ezizezabucala kwaye zithathwa njengezingenaxabiso.
Iinqwelo ezili-1,965 ezingafakwanga ilitye laseRussia, kubonisiwe kwiMbali yeMbali yeMbali yeLos Angeles County.
I-1,861.90-ct carats engafakwanga kunye negama elingachazwanga elivela eHiddenite, NC, elabucala. Ifunyenwe ngo-2003, ngoku le yeyona emerald inkulu yafunyanwa eMntla Melika.
Amakristali amakhulu amahlanu angenamagama avela eMuzo, eColombia, agcinwe kwigumbi leBhanki yeRiphabhlikhi yaseColombia, anobunzima ukusuka kwi-220 carats ukuya kwi-1,796 carats.
UFred Leighton wathengisa i-430 carats eqingqiweyo yamatye kaMughal kwizigidi zeedola.
Ingqokelela ye-al-Sabah evela e-Kuwait inamatye amaninzi amahle, kubandakanya i-398 carats crystal kwifayile enamacala amabini kunye ne-235 carats crystal bead.
I-crystal, igolide kunye ne-enamel yekhulu le-17 leMughal indebe yewayini i-7 cm ithengiswa eChristie nge- £ 1.79 yezigidi ngo-2003.
I-161.20 carats eqoshwe ilitye likaMughal lafumana i-1.09 yezigidi zeedola kuChristie ngo-1999.
Eyona emerald inkulu emhlabeni
I-Teodora: iikhilomitha ezingama-57,500 XNUMX
Ilitye eliluhlaza eliziikhilogram eziyi-11.5 lahlawuliswa njengelona lizwe likhulu leemeraldi emhlabeni laza labizwa ngokuba yiTeodora, igama elivela kwelesiGrike nelithetha “isipho esivela kuthixo.”
Ilitye elinqabileyo, nangona kunjalo, alinakuba lilo i-1-yezigidi kunye nelitye elingumnini walo u-Regan Reaney olinyusileyo njenge.
Umnumzana Reaney wabanjwa nge-Janyuwari ka-2012 eKelowna kumbindi we-BC, nanjengoko iRoyal Canadian Mounted Police yamthatha yamvalela. Umnumzana Reaney utyholwa ngamatyala obuqhetseba amaninzi e-Ontario, i-RCMP yathi kwingxelo emfutshane, kwaye amapolisa ase-Hamilton ayeneziqinisekiso zokubanjwa kwakhe.
Umnumzana Reaney wayengaziwa ngaphambili emapoliseni aseKelowna, kodwa akazange azive enethuku lokugcina iphrofayili esezantsi. Wayenobutyebi obuxabisekileyo obulingana nevatala bokuthengisa, emva kwayo yonke loo nto.
Ngapha koko, yayiyinyani, kodwa yayidaywe ngebala.
Eyona emerald inkulu emhlabeni: FAQ
Ixabisa malini iemerald enkulu?
Eyona gem inkulu emhlabeni eyakha yafunyanwa ingatyhilekanga kwi-shard enye, iBahia Emerald inobunzima obumalunga ne-1.7 yezigidi zeekarati, okanye i-752 lbs. Kwafunyanwa kwingingqi yeBahia esempuma yeBrazil. Ilitye elikhulu, ngoku elihleli kwigumbi elingaphantsi eLos Angeles, linokuxabisa kangange- $ 925 yezigidi.
Ngubani ophethe i-emerald enkulu emhlabeni?
Esona sikhephu sakha safumaneka emhlabeni, sinobunzima be-1.1 kg kwaye exabisa i-2 yezigidi zeepawundi, ifunyenwe emgodini eZambia. I-carats engama-5,655 yafunyanwa yinkampani yezemigodi iGemfields e-Kagem, owona mgodi mkhulu we-emerald emhlabeni, ngo-Okthobha 2, 2020.
Kaninzi Ulwazi lwe-gemological kwaye I-emeralds iyathengiswa kwivenkile yethu
Olu ngeno yafakwa kwi iindaba noqhotyosho I-emerald enkulu, I-emerald enkulu emhlabeni, I-emerald enkulu, I-emerald enkulu emhlabeni, Ihlabathi leemerald enkulu.